Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रम ओलीका सल्लाहकार थापाद्वारा प्रश्नको वर्षाः दिउँसै रात पार्ने ?
अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रम ओलीका सल्लाहकार थापाद्वारा प्रश्नको वर्षाः दिउँसै रात पार्ने ?
१० श्रावण २०७७, शनिबार १४:२६
काठमाडौँ, १० साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो वरियदाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्नको वर्षा नै गराउनुभएको छ ।
पछिल्लो समय एउटा होटलमा बसेर चरम गुटको राजनीतिमा रमाउनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चौतर्फि रुपमा आलोचना भइरहेको छ । सोही क्रममा नेकपाका नेता तथा सल्लाहकार थापाले समेत दर्जनौं प्रश्नहरु गर्नुभएको छ । अब प्रचण्डको ति प्रश्नहरुको उत्तर छ कि छैन, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । यस्तो छ थापाले आफुनो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको स्ट्याटस जस्तोको त्यस्तै,
ध्यान र निशाना कहाँ छ ?
समस्या त सन् १९६२ (२०१९साल) देखि यहाँ छँदैथियाे, किन याे काम २०१९ यताका १६ जना प्रधानमन्त्री र तिनका सरकारहरूले गर्न नसकेर माैन, उदासीन र बेखबर भएका त ? अनि अहिलेकाे सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीले नै याे काम गर्नुपरेकाे हाे त ?
त्यस्ताे निर्णय कुन वक्तव्यमा, कुन मितिमा र कहिले सार्वजनिक छ ? पार्टी प्रवक्ताले कति गते र कति बजेकाे मिडिया ब्रिफिङमा याे सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ ? कुन अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी पंक्तिलाई र कुन पत्राचारमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ ? सजबकि स्थायी कमिटीको २०७६ पुस ७ गते सम्पन बैठकले गरेकाे निर्णय समसमयिक प्रस्तावमा यसप्रकार सार्वजनिक गरिएकाे पाइन्छ :
स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि पार्टी एकतासँग सम्बन्धित विषय १५ दिनभित्र टुङ्याउने भन्ने निर्णय नै भएकाे थियाे । आज आठ महउना बितिसक्दा समेत ती १५ दिन किन आउन सकेनन् ? पार्टी एकीकरण कुन जग, अथाेरिटी, सहमति र घाेषणामा भएकाे हाे ?
जेन्डा तय गर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने र सहमति गर्ने कसरी हाे भनिएकाे छ ? भागबण्डा कसरी भएगरेकाे हाे ? समय समयका निर्णय कसरी र के के भएका छन् ? यी र यस्ता जिज्ञासाहरूसँगै याे प्रश्न विशेष रूपमा उठेकाे छ, ध्यान र निशाना कहाँ छ ? गतिविधि के कस्ता भइरहेका छन् ?
आफ्नाे पार्टीकाे सरकारले गरेकाे काम, जसमा सिंगाे राष्ट्र एकढिक्का बनेकाे छ, यसमा विवाद र भ्रम किन ? कसकाे स्वार्थ र चाहनामा याे सब भइरहेकाे छ ? विपक्षी दलका नेताकाे यसमा कुनै गुनासाे र हीनता प्रकट नहुने, सत्ताधारी दलभित्र किन उछिनपाछिनकाे हाेडबाजी चलिरहेकाे छ ? अनि याे मपाईंत्व प्रदर्शन किन ? तथ्यकाे आफूखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण किन ?